Khadkii Eminönü Eyüpsultan Alibeyköy Tram wuxuu dhamaan doonaa dhamaadka 2020 - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulEminönü Eyüpsultan Alibeyköy Tram Line wuxuu ku dhamaan doonaa 2020
Eminönü Eyüpsultan Alibeyköy Tram Line wuxuu ku dhamaan doonaa 2020
06 / 12 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, taraamka
eminon her eyupsultan alibeykoy tram line wuxuu ku dhamaan doonaa dhamaadka
Subaxnimadii, Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu ayaa markii ugu horraysay helay macluumaad ku saabsan “shaqooyinka xilliga qaboobaha oo laga helayo Isuduwaha Dayactirka Wadooyinka iyo Iskuxirka Kaabayaasha ee Edirkekapı. Baadhitaan lagu sameeyay dhismaha khadka. Imamoglu, khadka tareenka ee u dhexeeya Balat iyo Feshane wuxuu joogsadaa qiyaastii kilomitir 2016, wuxuu la socday shaqaalaha. Imamoglu oo fuliya howlaha alxanka inta udhaxeysa biraha xarkaha, ayaa su'aalaha uga jawaabay suxufiyiinta halkan jooga Imamoglu, "Wasiirkii hore ee Wasaaradda Dhirta iyo Biyaha Veysel Eroglu, ka dib markii aad ku dhawaaqday abaarta ka jirta Istanbul," Waxaan shaqeynayay usbuuc, qorshayaal diyaar ayaan nahay haddii la i weydiisto, waxaan ka caawin doonaa amarka Madaxweynaha, "ayuu yidhi. Ma heli doontaa codsi ”,“ Maareeyihii Guud ee hore ee'SKİ General, wasiir. Talada aan siinayo iyaga ayaa ah haddii ay jirto fursad ama fursad, wuu nala hadli karaa isagoo aan sugin amar. Waxaan raadinaynaa isaga. Arimahan oo kale ee deg-degga ah ee muhimka u ah umana sugaan amarada. ”
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul (IMM), ayaa ka qeybgalay soo bandhigida lagu qabtay Xarunta Xiriirinta Dayactirka iyo Kaabayaasha Wadooyinka ee Edirnekapı. Maamulka sare ee IMAMOGLU waxaa la socday shaqaale buuxa. Seyfullah Demirel, Madaxa Dayactirka Wadooyinka iyo Isuduwidda Kaabayaasha, ayaa siiyay macluumaad farsamo oo kusaabsan Imamoglu iyo wafdiga lasocda ee ku saabsan howlaha shaqo u diyaarinta jiilaalka ee Istanbul iyo awooda iyo mashiinada dhismaha ee ay leeyihiin. Imamoglu, oo doonayay in laxirnaashaha hay'adda IMM ay soo saaraan miis wada jir ah oo loogu talagalay xallinta dhibaatooyinka, ayaa yiri “Saaxiibbaday waxay isku diyaariyeen sidii ay ugu adeegi lahaayeen muwaadiniinteenna isla mar ahaantaana ay uga hortagi lahaayeen carqalada ay ku noolaan doonaan wadada. Uma maleynayo inaynu wax khaladaad ah yeelan doonno. Tani waxaa ku jira tuulooyinka. Waxaan diyaar u nahay dhamaan bannaanka magaalada ilaa bartamaha magaalada. 39 wuxuu yidhi, Milyon Waxaan u shaqeyneynaa milyan. Soo-bandhigidda ka dib, İmamoğlu wuxuu la kulmay shaqaalaha wuxuuna sameeyay baaritaanno gudaha ah.
NOLOSHAADA KU SAMEEYA BULSHADA GUUD
İmamoğlu ayaa markii dambe u dhaqaaqay baaritaankiisii ​​Edirnekapı wuxuuna u diray Balat. İmamoğlu, oo ay weheliso maamulka sare ee IMM, waxay fuliyeen dhismaha Khadka Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tram, dhismaha oo billowday Nofeembar 2016 laakiin aan lagu dhammayn karin waqtigii loo qorsheeyay. Imamoglu, oo lugeynaya waddooyinka tareenka, oo qiyaastii 2 kiiloomitir u jira Balat ilaa saldhigyada Feshane, ayaa ka helay macluumaadka maamulka. İmamoğlu, oo ku soo beegmay geedi socodka alxanka ee ay ku shaqeeyaan shaqaaluhu inta udhaxeysa biraha dhexdooda, ayaa istaagay oo ka helay macluumaadka shaqaalaha. Imamoglu, xidhashada galoofyada iyo guluubyada, habka alxanka, ayaa lagu fuliyay hagida shaqaalaha. Intii lagu gudajiray wakhtigan, sawirro midab ayaa dhacay.
Imamoglu, suxufiyiintu waxay kajawaabeen ajandaha dooda biraha. Su’aalaha uu weydiiyay Imamoglu iyo jawaabihii uu siiyay Madaxweynaha IMM waxay ahaayeen sida soo socota:
“Waxaan dooneynaa inaan dhameysanno safka ka hor biirka”
Shaqadii ayaa dib loo bilaabay. Ma loo soo bandhigay sida mid ka mid ah sadarka?
Yaanan joojin, aynu ugu yeerno qadka gaabis yar. Horay waxaa jiray gunno qorsheysan. Way gaabisay maxaa yeelay way dhammaatay; laakiin shirkaddu xoogaa yar bay sii shaqaysay mar labaad. Waxaan ka shaqeynaynaa ilo dheeraad ah. Waxaan rabnaa inaan meeshan u diyaarsanaano 2020. Kaliya maahan xariiqaan, laakiin sidoo kale marinka Unkapanı ee 2020… Sababtoo ah waxaa jiray maqnaanshaha naqshadeynta, waxaa jiray mashaariic aan jirin. Saaxiibbaday way aadi jireen iyaga. Ilaa joogsiga ugu dambeeya, labadaba xarunta wareejinta ee ku xiraya khadka metrooga iyo qeybta Sirkeci-Eminönü, dhammaan naqshadaha dhibcaha isgoyska ee leh lugeeyaha iyo nidaamka tareenka ayaa sii socda. Xariiq aan dardargelinno oo aad u daryeelno. Waxaa jira gaadiid aad u mashquul badan oo dadka ka kala socda Alibeyköy iyo Eminönü iyo Sirkeci. Laakiin taas annaga noogu muhiimsan, waxaan ka hadlaynaa aag dalxiis maalinta oo dhan. Dhinac, khad qurux badan ayaa loogu talagalay in lagu daawado Dahabka Dahabka ah. Laakiin nasiib xumo si tartiib tartiib ah ayey u socodsiisay. Waxaan rabnaa inaan sida ugu dhakhsaha badan u dhammeyno. Meelo aad u muhiim ah ayaa jira. Waxaan ku haynaa madxafyo ku yaal geeska Dahabka Dahab. Waxaan naqshadeyneynaa meelo cagaaran oo qurux badan. Waxa kale oo jira goobo taariikhi ah oo ka socda Balat ilaa Eyüpsultan. Waa khadka wax soo saar badan oo wax ku biiriya labadaba dalxiiska iyo gaadiidka casriga casriga iyo sidoo kale kan istaagaya khadka Mecidiyeköy-Mahmutbey. Sidaa daraadeed, waxaan si adag uga shaqeynaynaa inaan keenno khadkan quruxda badan dadka ku nool magaalada Istanbul ee 2020.
Markaad tiraahdid 2020, goorma?
Isagoo kahadlaya rajo, waa xagaaga dambe ee xagaaga. Wax yar oo macquul ah, waa sida dhamaadka sanadka. Waxaan dardargelin karnaa. Dabcan, tani waxay sidoo kale ku saabsan tahay maalgelinta. Gudaha waxaa ka jira arrimo farsamo, asxaabteyda ayaa diiradda saaraya. Laakiin waxaan rajeynayaa inaan halkaan ku dhameysan doono wax allabari.
'XUQUUQADA ALLAH WAA SADDEX'
Waxaan ku aragnay xafladaha xafladaha Kadir Topbaş xafladaan, ka dib Mevlüt Uysal. Hadda, duqa saddexaad, waxaad baadhaysaa qadkaan. Immisa dhaqaale ayaan u baahanahay? Immisa ayaa u hadha boqol ahaan?
Waad ogtihiin in Eebbe leeyahay saddex xuquuq. Xaqiiqdii, 35 waxay taagan tahay cidhifka guud ee qiimaha. Ma jiro deeq loo qorsheeyay kahor. Ku dhawaad ​​boqolkiiba 60 ayaa la naqshadeeyay oo maalgelin la helay. Markii la dhammeeyey, shirkadda ayaa joojisay doorashadii ka hor iyo markii aannu nimid, iyada oo ay jiraan wax dhiirrigelin ah, hawshu si tartiib tartiib ah ayey u martay; laakiin isagoo wakiil ka ah dhamaadka maalinta, qandaraasluhu wuxuu si sax ah u dalbanayaa maalgelin. Marka waxaan dhammeyn doonaa inta hartay 35. Waxaan muhiimad gaar ah u leenahay xariiqan. Sababtoo ah wuxuu ku mashquulsan yahay dhar taariikhi ah. Meelaha qaar si cad ayaa loogu xadgudbay maxaa yeelay dayaca iyo sidoo kale mashquul. Oo si dhakhso leh ayaan uga takhalusnaa xadgudubyadaas. Tani waa mid ka mid ah dhibco adduunka ugu quruxda badan. Waxaan leenahay heer sare oo ahmiyad u leh isaga.
Maalgelinta ma lagu bixin doonaa amaahda shisheeye?
Dabcan, waxaan raadinaa il kasta. Ilaha dibedda waxay umuuqdaan kuwo ku habboon xilligan. Waxaan haynaa wada hadal wax ku ool ah. Waxaa jira ilo ka agdhow dhinacyadu. Laakiin halkan, u hoggaansanaanta, u hoggaansanaanta, muddada dheer, oggolaanshaha qaar ... Dhammaan waa muhiim. Qaar ka mid ah shaqadeenna ayaa ku imaan doona ajendaha Golaha. Arimaha qaar waxay leeyihiin Ankara ogolaansho. Waxaan raacaynaa si guud ahaan.
“TRAFFIC YA SI GÖKSU,“ Biyo ”DIIWAANGALINTA EROĞLU
Tevfik Göksu wuxuu dhibaato ku qabay taraafikada gudaha Istanbul bishii 6, 25 maysan jirin sanado mı?
Malaha wuxuu doonayay inuu sameeyo kaftan. Laakiin waxaan qiyaasayaa inuu lugo yar wax badan ku socday. Wuu kari kari waayay. Anyway. Dadweynaha ayaa fahmay waxaad u jeeddo. Uma baahni inaan ka jawaabo taas.
Wasiirkii hore ee Duurjoogta iyo Biyaha Veysel Eroğlu, ka dib ku dhawaaqidaada abaarta ka dhacday Istanbul, "Waxaan shaqeynayay usbuuc, qorshayaasheyda waa diyaar hadii la i weydiisto, waan ka caawin doonaa amarka Madaxweynaha," ayuu yiri. Ma heli doontaa codsi?
Maareeyihii hore ee ISKI, wasiir. Talada aan siinayo iyaga ayaa ah haddii ay jirto fursad ama fursad, wuu nala hadli karaa isagoo aan sugin amar. Waxaan raadinaynaa isaga. Arimahan oo kale ee deg-degga ah iyo kuwa muhiimka ah ee dadweynaha ka jira kama sugaan amarrada. Taasi waa taladayda koowaad. Arrinta labaad ayaa ah; Waxaa jira dhibaato Melen. Fiiri, maanta waa sanadka ay tahay in la dhammeeyo sida hadda ah, sanadka 3 waa sanadkii ay ku dhawaaqeen. Si kale haddii loo dhigo, taariikhda dhamaadka ee 2016, oo ay ku dhawaaqday inay tahay usbuuca ugu horreeya ee Diseembar, oo ay tahay inay ku dhammaato 3, ayaa dhaaftay sannadka. Maxaysan u gudubin? Wali fursad uma jirto in ay dib udhac ku dhacaan, maxaa yeelay maalgashi dheeraad ah ayaa jira. Maalgashigaas waa inuu soo baxo. Waana ka hadalnaa. Melen waa dhamaaday. Ma nihin, Waxba lama qaban. Aad baad ugu mahadsantahay shaqada aad qabatay. Dabcan way dhici doontaa. 25 ma sahlan tahay sanado? Waxaad xukuntay rubuc qarni Waan bogaadinaynaa waana ku mahadsan nahay. Laakiin Melen kuma dhamaan. Dhibaatooyinka Melen ee aan dhammaanin, dhibaatooyinka waa la xallin doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah ayaa loo gelin doonaa adeegga. Si kale haddii loo dhigo, waa inaysan dhicin dib u dhac ama dhibaatooyin dhaqaale. Waa in sida ugu dhaqsaha badan looga guuleysto. Waxaan idhi Madaxweynaha waa inuu weydiiyaa xisaabta wixii qalad ah ee la galay. Wax kale ma dhihin. 3 waa taariikhda ay ugu yeeraan sanadka furnaan doona waagii hore. Tan kale, sidaan idhi; Haddii uu doonayo inuu na siiyo macluumaad, waxaan u maleynayaa inaysan jirin baahi loo qabo in la dalbado, kani waa adeegga dadweynaha, albaabkeenna ayaa furan. Waxaan raadinaynaa isaga. Maareeyaha guud ee İSKİ ayaa wacaya wuxuuna weydiiyaa macluumaadka ay hayaan. Haddii ay jiraan, waxaan u adeegsan karnaa si farxad leh. Marka fikrad kasta, faham kasta oo wanaagsan oo laga soo saaro waddankan wuxuu u furan yahay albaabkeenna.
“WAA MAXAY MELEN DAM UU QALIN JIRAY”
Go'aanka ayaa sheegaya in Melen uu kaalin ka cayaaro hadal kasta. Melen ayaa la sheegay inuu biyo ka helay Istanbul. Melen ma gudahabaa mise waa jiraa?
Daadad Melen, laakiin waxaan ka hadlaynaa biyo-xidheenka. Goorma ayuu Melen daad qaadayaa? Waa la daabacay hadda. Laakiin laguma daabici karo badhtamaha xagaaga ama waxay noqoneysaa ugu yaraan. Waa maxay sababta? In biyaha wabiga Melen ay yaraayeen waqtigaas. Maxaa loo dhisay Melen Dam? Had iyo jeer u taagan samaynta kayd biyood. 30 waa mashruuc sanadle ah, qof walbana wuxuu leeyahay shaqaale. Waxaan ula jeedaa, qof ayaa ka fekeray sannadihii 80. Ka dib qof ayaa qaatay go’aankan iyada oo aan qorshayn dawlad iyo wixii la mid ah iyo wixii la mid ah Waxaa la yiri; Waxay ku dhammaatay 2016. Biyahana halkaas ayey iskugu uruursanayaan, xitaa waqtiga ugu dhib badan, ayaa biyo laga soo qulqulan karaa halkaas, xitaa waqtiga ugu kulul. Laakiin hadda Webiga Melen wuu cararaya, haa, biyo ayaa inaga yimid. Biyaha waxay ka yimaadaan Istırancalar. Qof walba waa ku lug leeyahay. Marka wax qalad ah malahan taas. Dhibaatada ayaa ah: Maxaysan u dhammayn melen Dam? Waa maxay caqabadaha in la dhammaystiro, waa maxay carqaduhu? Sideese kuwan loo xallin doonaa? Aan si dhakhso leh wax uga ogaano arrintan. Taasi way fududahay.
Markii uu dhammeystiray baaritaannada, İmamoğlu wuxuu salaadda Jimcaha ku tukaday Masjidka Valide Sultan ee Aksaray.
NATIIJADA XIRFADAHA SINCE 2016
Shaqada khadka Eminönmin-Eyüpsultan-Alibeyköy Tram Line wuxuu bilaabmay Noofembar 2016. Marka nidaamka xadiidka tareenka ee 10,1 kiiloo mitir ee 14 la dhammeeyo, 15 wuxuu qaadi karaa kun kun oo rakaab ah hal jiho saacaddii. Khadku wuxuu daboolayaa degmooyinka Fatih iyo Eyüpsultan wuxuu kusii socon doonaa dhinaca Xeebta Dahabiga ah ee Jasiiradda taariikhiga ah ilaa Eyüpsultan iyo laga bilaabo IOM Alibeyköy Pocket Bus Station. In khadka taraamka, nidaamka tamarta joogto ah dhulka ka codsatay markii ugu horeysay ee Turkey (catenery free) waxaa laga codsadaa. Nidaamka, kaas oo baabi'inaya sumaynta sawirka ay keento “fiilooyinka catenary,, waxay salka ku haysaa xaqiiqda ah in taraxwayntu ay ka hesho tamar saddexaad tareen oo u dhaxaysa labada biraha. Qaabkaan, gaariga waxaa lagu xakameyn doonaa nidaam elektrooni ah oo dhameystiran. Xariiq gogol-dhaaf oo laga dhex heli doono xuduudaha degmooyinka Fatih iyo Eyüpsultan; Kabataş-Bağcılar Tram iyo Khadadka Magaalada ee marinnada Eminönü ee Saldhigga Eminönü, Hacıosman-Yenikapı Metro Line iyo Küçükpazar Station, Eyüpsultan-Piyer Loti Cable Car Line iyo Eyüpsultan Cable Car Station, Mecidiyeköy-Mahmutbey Station Station iyo Alibeyköy Station. waxaa sidoo kale lagu rakibi doonaa khadka loo yaqaan 'Metrobus Line' ee xarunta 'Ayvansaray Station'. Khadku wuxuu bixin doonaa is-dhexgalka gadiidka badda ee ka kala socda Eminönü, Fener, Balat, Ayvansaray iyo Eyüp piers.
Khadka tareenka Eminonu-Alibeykoy ayaa lagu dhameyn doonaa bilaha 30
Eminönü-Eyüp-Alibeyköy ayaa lagu soo bandhigay tareenka
Shaqada Eminönü-Alibeyköy Tramway waxay bilowday
Mashruuca Ched wuxuu bilaabay Mashruuca Tareenka Eminönü Alibeykoy
Ogeysiinta Ugaarsiga: Injineer la kantaroolay iyo Eminönü-Alibeyköy Tram Line…
Eminönü-Alibeyköy Tram Line ayaa la iibsaday
Habka EIA wuxuu bilowday hindisada dhismaha Eminönü - Alibeykoy Project Tram Line
Eminönü - Alibeyköy Tram Line project No EIA looma baahna qandaraaska dhismaha…
Eminönü - Alibeyköy Tram Line Mashruuca Dhismaha iyo shaqooyinka elektaroonigga ah…
Ogeysiiska Qaanuunka: Adeegga latalinta injineerinka kormeerka ayaa la heli doonaa…
Ogeysiiska Qandaraaska: Shirkadda Eminönü-Alibeyköy Dhismaha, Qalabka Farsamada iyo Gaadiidka iibsiga
Waxa aanad ka warqabin Eminönü-Alibeykoy Tram Line (Video)
Eminönü Alibeyköy Tram Line Tixraac Cawaaqi ah (Warbixinta Gaarka ah)
Saldhigga Alibeykoy Mobile Station
Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tram Line
Khadka toosan ee Haweenka Amniga Shaqsiyadeed wuxuu bilaabay